Saagi - Kutaa filadhu
Galmee guutummaa kutaa tokkotti, yk kutaa biroo keessaa kutaa moggaafame tokko saaguu nidandeessa. Akkasumaas, kutaa tokko akka geessituu DDEtti saaguu nidandeessa.
Kutaa gulaaluf, Dhangii - Kutaalee filadhu.
Qaaqan Kutaa Saagi caancalawwan kanan gadii of keessa qaba:
Mudanaa bitaa fi mirga waliin kutaa galcha.
Kutaa isa ati qubaannoo qaree ammaatti qindeesiitte galmicha keessatti saaga.
Title is: Kutaa Galchi